ချောကလက်ကျူးပစ်လေး: အလင်းပျောက်နေတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေး
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 3:47 AM
ကလေးမလေးတွေ အတွက် မှတ်သားပြီးရှောင်ရှားရမဲ.အရာလို. ထင်မိပါတယ်
ဟုတ်တယ် မရှောင်မတိမ်းသာ အကျဉ်းအကျပ်ထဲရောက်ရင် ထွက်ပေါက်ပျောက်တော့
ဘ၀တွေ လှပမှန်းမသိ နစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ကုန်တော့တာလေနော်
ဒါပေမဲ့သူဘ၀ ကံကြမ္မာက ဒီလိုဒီအကြောင်း ဖြစ်လာတော့
သံသရာ ၀ဋ်ကြွေးရှိသလောက်ပေါ့ ကံ ကံ၏အကျိုးတရားပေါ့
မြန်မာပြည်မှာ ထမင်းတစ်လုတ် မငတ်ပါဘူး
အရမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးပဲ ကျုပစ်လေးရေ..
လုံးဝထောက်ခံတယ်.. လူတယောက်ကို သူ့အပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီး မရှုံ့ချသင့်ဘူး.. အားလုံးမှာ သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိကြတယ်လေ :)
အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ ပဲမှတ်လိုက်ပါစေ ကျုးပစ်ရေ
ဒီလိုပါပဲလူဘ၀ဆိုတာ နိမ့်တဲ့သူကမြင့်သူကိုအားကိုးနဲ့ 
ပိုစ့်လေးပြီ အတွေးများ၇ှိလာပါတော့တယ် :)
အင်း ဘဝက နိမ်.ပါးလွန်းတော. တွယ်မိတွယ်ရာ တွယ်ထားရတာပေါ.နော် အစကတည်းကလဲ ရိပ်မိမှာပါ အိမ်ထောင်ရှင်မှန်းသေချာမသိသောငြား. ဖြတ်လမ်းလိုက်တယ်လို.ပြောရမှာပေါ.နော်.. ကိုယ်.ဟာကို အလှပြင်ဆိုင်မှာ ရိုးရိုးသားသား ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လဲ ဒီလောကထဲကို မဝင်နိုင်သော်လည်း ဘဝတခုကို ရပ်တည်လို.တော.ရပါတယ် ဒါပေမဲ. ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိတဲ. ဘဝတွေဆိုတော. ရုန်းကန်ရတာ ဆင်းရဲမှာပေါ.နော် ဆင်းရဲတဲ.ဘဝကလာတဲ.သူတွေကလဲ အဲဒီဘဝထဲကို ပြန်မသွားချင်ဘူးလေ.
တစ်ကယ့်ကောင်းတဲ့ အက်ဆေး လေးပဲဗျာ
ကိုယ့်စွမ်းအားနဲ့သာ ဘဝကိုရပ်တည်ချင်တာ လူ့သဘာဝပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘဝပေး အခြေအနေအရ